काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट खर्च न्यून - हाम्रो देश
१७ फाल्गुन २०७७, सोमवार
१७ फाल्गुन २०७७, सोमवार Monday, 01 March, 2021
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट खर्च न्यून
राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधारका आयोजनामा पूँजीगत खर्च कम हुने समस्या काठमाडौं–तराईलाई जोड्ने ‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना’मा पनि देखिएको छ । वार्षिक रूपमा उक्त आयोजनाका लागि सरकारले बजेट वृद्धि गर्दै आएको भए पनि खर्च भने सोहीअनुसार हुन सकेको छैन ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा शुरू भएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर (किमी) उक्त दु्रतमार्ग निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. १५ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवको ५ महीना बितिसक्दा पनि आयोजनामा रू. ५३ करोड मात्रै खर्च भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा हिमा वि.क.ले लेखेकी छिन् ।
न्यायाधीश पत्नीको स्कुटरमा भेटियो ब्राउन सुगर
म्यानमारमा सेनाले गोली चलायो १८ जनाको मृत्यु